Maqaal Marti Nagu Ah Iyo Shabakada Boxoffice India Oo Maamuus U Sameesay Vinod Khanna | Filimside.net
Home » Box Office » Maqaal Marti Nagu Ah Iyo Shabakada Boxoffice India Oo Maamuus U Sameesay Vinod Khanna
Maqaal Marti Nagu Ah Iyo Shabakada Boxoffice India Oo Maamuus U Sameesay Vinod Khanna
Madaama Super Star Vinod Khanna maanta geeriyooday shabakada Boxoffice India oo aan looga baranin inay nolosha jilaayaasha ka hadasho ayaa maqaal u hibeesay Mastaana maqaamkii uu fanka Hindiya ka gaaray.
Hadaba maqaalkaan marti nagu ah kaliya shabakada Filimside wey idiin fududeesay inaad afkiina hooyo ku aqrisataan fadlan hoos kaga bogo:
Atooraha halyeega ah Vinod Khanna ayaa maanta geeriyooday asigoo 70-jir ah, wuxuuna la ildarnaa xanuunka kansarka oo kaadi heesta kaga dhacay wuxuuna isbitaal ku jiraay in mudo ah, laakiin caafimaadkiisa wuu sii xumaaday dhawaanahan sidaa darteed subaxdii Khamiista ayuu geeriyooday.
Vinod Khanna wuxuu ka mid ahaa atoorayaashaa ugu weynaa uguna saameynta badnaa ee ebid fanka Hindiya soo maray wuxuuna markii kowaad sanadii 1969 kasoo muuqday filimkii Man Ka Meet.
Filimkaan waxaa soo saare ka ahaa Sunil Dutt oo xiligaas ahaa atoore awood badan wuxuuna Sunil Dutt kusoo caan bixinaayay filimkaan walaalkiis Som Dutt, filimkaan wuxuu noqday mid guuleestay laakiin Vinod Khanna ayaa aqoonsi ku helay ee Sunil Dutt walaalkiis aqoonsi kuma helin.
Vinod Khanna kadib waxaa u xigeen filimo Blockbusters waa weyn noqdeen ee uu door caawiye ku lahaa sida Sacha Jhuta, Aan Milo Sajna iyo Purab Aur Pashim.
Laakiin wajiga ayuu badashay wuxuuna laadar ka noqday filimkii Classic noqday Mera Gaon Mera Desh (1971) ee uu doorka caanka ah Jabbar Singh ku matalay.
Filimkaan Dharmendra ayaa atoore kowaad ka ahaa laakiin Vinod Khanna awoodiisii jiliin iyo saameyntii uu la yimid ayaa sababtay inuu ka mid noqdo filimada Blockbuster-ka noqdeen kuwooda ugu weyn ee Hindiya sameeyeen.
Vinod Khanna sanadii 1974 waa sanadkii uu cirka galay markii uu sameeyay Haath Ki Safai kaasi oo Hit weyn noqday kana dhigay atoore filimada wajigiisa ku gadi karo.
Wixii markaas ka dambeeyay gadaal dib uma fiirin wuxuuna sameeyay filimo badan oo Hits taariikhda galeen noqdeen, laakiin filimkii Qurbani (1980) ayuu Hindiya oo dhan ku qabsaday Vinod Khanna.
Sidii uu Qurbani ku furmay waalida uu Hindiya ku qabsaday ilaa haatan waa mid taagan waxaana lagu tilmaamay filimkii ugu hadal heyntaa badnaa ee ebid Hindiya soo maray markii tiyaatarada la saarayay wuxuuna noqday Hit weyn.
Balse nasiib daro Vinod Khanna maba joogin Hindiya markii Qurbani aduunyada oo dhan qabsaday wuxuu aaday dalka Mareekanka asigoo ku biiray koox diimeedka Osho gabi ahaanba wuu iska dhaafay fanka iyo awoodii uu heestay fursad ahaan ee uu Hindiya ku qabsan karay wuu iska dayacay.
Sanadii 1987 ayuu dib ugu soo laabtay fanka Hindiya wuxuuna kusoo laabtay filimkii Insaaf oo ganacsi heer sare ah sameeyay, sidoo kalena filimadiisii Suryaa (1989) iyo Chandni (1989) waxay noqdeen Hits waa weyn mana aysan lumin jaceylkii loo qabay.
Dhawaanahan Vinod Khanna wuxuu kasoo muuqday oo uu door caawiye ama aabo ku matalay filimada caanka ah sida Wanted (2009), Dabangg (2010), Dabangg 2 (2012) iyo Dilwale (2015).
Vinod Khanna wuxuu ka mid ahaa kooxdii atoorayaasha ahaa oo gacan weyn fanka Hindiya ku badaleen kuna baahiyeen daafaha caalamka fanka Hindiya asigoo magac dheer iyo awood lixaad leh Hindiya iyo daafaha caalaamka ku dhex yeeshay.
Maanta in Bollywood-ka yahay shirkad weyn oo miisaaniyaad xoog leh ku fadhiso atoorayaal awood badana heesato waxaa kaalin weyn kasoo caayaray Vinod Khanna oo fanka Hindiya si lixaad leh usoo hormariyay xiligiisii waxba ma uusan ka hagranin Hindiya maantana shaqadii adkeyd ee uu soo qabtay ayaa lagu naaloonayaa.
F.G: maqaalkaan waxaa la qoray maalinta uu geeriyooday Vinod Khanna
One Response to Maqaal Marti Nagu Ah Iyo Shabakada Boxoffice India Oo Maamuus U Sameesay Vinod Khanna
nin fanka hindiya u soo halgamay bu aha